Kenya : Keniàna mihetsika mitaky ny fandraràna ilay fanafody Furadan famonoana bibikely le pesticide Furadan · Global Voices teny Malagasy
Fanafody famonoana bibikely, atsaharo ny fanapoizinana ny tontolo iainana.
Voadika ny 19 Septambra 2020 16:05 GMT
Zanaka liona voapoizina tao Masai Mara
Nahavita nametraka teboka tao anatin'ny fanentanany ho fandraràna tanteraka ny Furadan ireo mpiaro tontolo iainana ao Kenya. Ny Furadan dia fanafody famonoana bibikely mampiasa ny singa ‘carbofuran‘ izay nahapoizina liona niisa 76, ary ankehitriny dia notsoahana tsy ho hita eny amin'ireo tsena ao amin'io firenena io.
Nanomboka teo dia namaly ny antso ho fandraràna tanteraka an'io poizina io teo anoloan'ny antenimiera ny solombavambahoaka ao amin'ny faripiadidian'i Naivasha, John Mututho. Ny 2 Jona 2009, navoakan'ny bilaogy Baraza [ amin'ny fiteny anglisy toy ireo rohy rehetra ato anaty lahatsoratra] ireo ampahan-gazety navadiny ho amin'ny endrika nomerika, nisy ireo lahatsoratra nitantara hoe notakian'ny solombavambahoaka John Mututho tamin'ny Minisitry ny Ala sy ny Tontolo Iainana ny handraràna tanteraka io fanafody io, niaraka tamin'ny fanohanana feno avy amin'ireo parlemantera hafa.
Tao anatin'ireo gazety androany, nisy lahatsoratra roa mikasika ireo liona voapoizina tao Masai Mara. The Standard milaza hoe ny Minisitry ny Ala sy ny Tontolo Iainana, Dr Noah Wekesa, dia niteny fa maty ireo liona tao Masai Mara ary ny Furadan no nanapoizina azy ireo. Fa na izany aza dia nilazàny i John Mututho mba handefa ny fangatahana fandraràna ataony ho an'ny Minisitry ny Fambolena sy ny masoivoho misahana ny fanarahana maso ireo fanafody famonoana bibikely.
Ao anatin'ilay lahatsoratra iray hafa, an'ny Daily Nation, ny sampandraharaha misahana ny tontolo iainana ao Kenya (KWS), izay mpiahy ny biby ao Kenya, dia miampanga ireo tantsaha ho nanapoizina ireo liona, ireo alikadia sy ireo biby 35 mpihinana fatin-javatra tao Masai Mara. Nolazain'ny KWS fa nahitan'izy ireo soritra fanafody miloko mavokely teny amin'ny vatan'ireo fatim-biby natao jono ho an'ireny biby mpihinana hena sy fatin-biby ireny.
Na ny minisitra aza dia niaiky hoe ny Furadan no nanapoizina ireo liona marobe tao amin'ilay firenena izay tsy misy liona afa-tsy 2.100 sisa (raha 30.000 izany am-polon-taona vitsy lasa izay), ary nandefa ilay antso ho fandraràna an'ilay fanafody tany amin'ny minisitry ny fambolena sy ny masoivohom-panjakàna mpanaramaso ny fanafody famonoana bibikely ao Kenya.
Efa nanomboka tany amin'ny anelanelan'ny andian-taona 90 ireo fikambanana mpiady ho fiarovana ny zavaboary ao Kenya no nitolona, fony voamarika ny fisian'ny fahapoizinana marobe nanjo ireo ganaganadia tany amin'ny faritra misy ireo tanimbary ampidiran-drano ao Mwea, faritany atsinanana. Saingy nanomboka tamin'ny nandefasana tsy ela akory ilay fanadihadiana an'ny fantsom-pahitalavitra amerikàna CBS momba ireo liona voapoizina no nivadika ho olana pôlitika io olana io ho an'ny governemanta keniàna. Ttamin'ny 2008, nataon'ny solombavambahoaka John Mututho nisava làlana an'io fampahatsiarovantena io ny fitakiana ny fandraràna ilay fanafody, taorian'ny fahapoizinana nanjo ireo liona tao Masai Mara.
FMC Corporation, mpamokatra ny Furadan, izay any Philadelphie any Etazonia no foibeny, dia nanambara ny fisintonana avy hatrany ilay vokatra simika tsy ho azo amidy ao Kenya, Ogandà, Tanzania, ora vitsy monja taorian'ny nandefasan'ny fantsona CBS ny fanadihadiany tao anatin'ilay fandaharana 60 Minutes tao Etazonia, saingy mbola misy hatrany ireo liona sy bibidia hafa maty vokatry ny Furadan. Misintona lakolosy fanairana i Martin Odino, Keniàna iray mpikaroka miasa ao amin'ny Tranombakoka Nasiônaly ao Kenya, ao amin'ny bilaoginy Stop Wildlife Poisoning (Atsaharo ny fanapoizinana ny fiainana an'ala) momba ireo vorona voapoizina, izay avy eo mety hisy hivarotra ho toy ny haza.
Volana iray taorian'ny nisintonan'ny FMC, mpamokatra azy, ireo fanafody Furadan, nanamarika ny bilaogy Baraza fa nisy zanaka liona vao valo volana voapozina rehefa avy nihinana fatina ombivavy voapoizin'ny fanafody famonoana bibikely heverina ho ny Furadan. Marobe ireo alikadia ary 40 ireo biby hafa mpihinana fatin-javatra no voapoizion'io fatina ombivavy io ihany koa. Io zanaka liona io dia avy amina fianakaviana liona nisy liona efatra – izay tsy fantatra ny niafaran'izy ireo.
Ny fisian'ireny trangana fanapoizinana ireny dia vao mainka nampitombo ny fahavitrihan'ireo mpikatroka amin'ny fanentanan-dry zareo ho amin'ilay fandraràna. Ny 9 Jona 2009, nifamory tao amin'ny biraon'ny WildlifeDirect tao Nairobi ry zareo ary nandritra io fivoriana io, nabaribarin-dry zareo ny toedraharaha sarotra iainan'ireo vorona. Raha fantatra ankehitriny ny fahapoizinana nahazo ireo liona, ny an'ireo vorona kosa mbola mampivarahontsana lavitra noho izany. Tatitra iray avy amin'ny KWS no milaza fa mahafeno kamiao ny isan'ireo vorona maty amin'izao fotoana izao. Avy hatrany ny WildlifeDirect, izay nikarakara io fihaonana io, dia namoaka fampitam-baovao tao amin'ny bilaogy Baraza.
Azon'ireo mpamaky azy atao ny manolotra fanohanana / fanomezana ao amin'ny Bilaogy Baraza.